Mieritreritra Zavatra Vetaveta Foana Aho | Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Groenlandey Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kikongo Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Ndau Norvezianina Ossète Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tiorka Tiv Tseky Tsonga Télougou Umbundu Urhobo Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Fidio tsara ny namanao. Manao resaka vetaveta ve ny namanao sy ny mpiara-mianatra aminao? Vao mainka ho sarotra aminao ny hifehy ny eritreritrao raha miditra amin’ilay resaka ianao. Matetika ianao no afaka mahita fomba hialana amin’ilay resaka nefa tsy miseho ho masina be ary tsy esoin’ny ankizy.
Avelanao hisy virosy ho tafiditra ve ao amin’ny ordinateranao? Aza avela hisy zavatra vetaveta ho tafiditra koa àry ao an-tsainao
Aza tia fialam-boly vetaveta. Natao hanairana ny filan’ny nofo ny ankamaroan’ny fialam-boly ankehitriny. Izao no torohevitry ny Baiboly: “ Aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin’ny zava-drehetra mandoto ny nofo sy ny saina, ka hanao izay hahatonga lafatra ny fahamasinana ao amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra. ” (2 Korintianina 7:1) Aza tia fialam-boly mety hanaitra ny filan’ny nofo àry.
Tadidio izao: Tsy ratsy ny faniriana hanao firaisana. Efa nataon’Andriamanitra hifankatia ny lehilahy sy vehivavy, ary afaka manao firaisana izy ireo raha mpivady. Raha mahatsapa hoe te hanao firaisana mafy àry ianao, dia aza mieritreritra hoe ratsy saina ianao, na tsy ho afaka ny hadio fitondran-tena mihitsy.
Fehiny: Afaka mifidy izay zavatra tianao hoeritreretina ianao. Afaka ny hadio eritreritra sy hadio fitondran-tena ianao, raha tianao!